Magacyada Ay Soomaalidu U Taqaanno 12-Ka Bilood Ee Sannadka Iyo 7-Da Maalmood Ee Toddobaadka | Berberatoday.com
Magacyada Ay Soomaalidu U Taqaanno 12-Ka Bilood Ee Sannadka Iyo 7-Da Maalmood Ee Toddobaadka
Akhri Qormo Xiiso Leh Oo Ku Saabsan Xeerrarka Iyo Dabarrada Af-Ku-Hadalka Soomaaliga
– W/Q. Xasan Maxamuud “Xasan Burco”
Waxaan door biday inaan ka qaybgalo golahaa miiggan ee caqiibada leh Weedhsan . In kasta oo aanan ku baaqayn wax sidaa u sii buuran. Haddana, la arkee inta yar ee aan hayaa inay wax tarto. Waayo? Soomaalidu waxay ku maahmaahdaa “in nin ragihi qaban karo ayaa reer ka dhintaa”. Waxaan halkan ku soo gudbinyaa Cutub ka 12aad ee Buugga BAACEED. Buuggan oo ku saabsan Xeerka iyo dabarka Af-ku hadalka Soomaaliga, Qalinkiisana ilaahay aniga igu sababay.
Bilaha Dayaxa Ee Soomaalidu Tirsato
Sida laga soo xigtay ilaahay haw naxariistee Muuse I. Galaal oo ka soo guuriyay tiraabtii uu ka soo ururiyay odayaal badan oo soomaaliyeed oo uu ka mid yahay Caamir Ducaale. Bilaha soomaligu waxa ka kooban yihiin 12 bilood. Waxay la mid yihiin bilaha kale ee ay quruumaha kaladuwan ee dunidu leeyihiin. Waxay tirsadan dayaxa. waxaa loo tiriyaa laba hab oo kala ah 1 Yagtiis iyo 2 Tooman. Yagtiis waa bilaha 30 kudhamaad ka ah. Toomanna waabilaha 29 kudhamaad ka ah. Sidaadarteed marka bishu ku dhamaato 29 waxaa la waayaa habeenakay noqonlahayd 30. Habeenkaa waxay dadku yidhaahdaan bishu way dibotay habsaantay
Bilaha Soomaalida Oo La Bar Bardhigay Kuwa Carabiga
Dago waxaa ay Soomaallidu u taqaannaa bisha Muxaram oo ka kooban 30 habeen
Bil-dhurro-hore waxaa ay Soomaallidu u taqaannaa bisha Safar oo ka kooban 29 habeen
Bil-dhurro-dambe waxaa ay Soomaallidu u taqaannaa bisha Rabiic al Awal oo ka kooban 30 habeen
Rajal-hore waxaa ay Soomaallidu u taqaannaa bisha Rabiic al Thaani oo ka kooban 29 habeen
Rajal-dhexe waxaa ay Soomaallidu u taqaannaa bisha Jamaad al Awal oo ka kooban 30 habeen
Rajal-dambe waxaa ay Soomaallidu u taqaannaa bisha Jamaad al Thaani oo ka kooban 29 habeen
Sabbuux waxaa ay Soomaallidu u taqaannaa bisha Rajab oo ka kooban 30 habeen
Waabberiis waxaa ay Soomaallidu u taqaannaa bisha Shacbaan oo ka kooban 29 habeen
Soon waxaa ay Soomaallidu u taqaannaa bisha Ramadaan oo ka kooban 30 habeen
Soon-fur waxaa ay Soomaallidu u taqaannaa bisha Shawaal oo ka kooban 29 habeen
Sidataal waxaa ay Soomaallidu u taqaannaa bisha Dulqacda oo ka kooban 30 habeen
Arrafo waxaa ay Soomaallidu u taqaannaa Dul-xija 29 habeen
Maalmaha Soomaaligu waa Todoba maalmood sida maalmaha kele ee dunida laga tirsado.Waxa isu gayntooda la yidhaahdaa Todobaad. Todobaadka soomaaligu wuxuu ka bilawdaa Sooroga, sooroga sida ka muuqata ereybixinteeda waxay soorogtaa oo mar labad soobilawdaa Todobaadkii oo hore ugu dhamaaday Hakis. Hakis waxay hakisaa hawlaha shaqo iyo ee soo socday todobaadka. Waxay taageersataa Hakisbilaw oo ah maalinta ka horeysa. Koobin waa maalinta labaad ee todobaadka waxaa koobin loo yidhi waamaalinta Tacab-tiriska koobaad. Maxaayeelay, Hal-yeele maalin-tacab u dhamaaday ayaa laga soodheegtay. Waxaad mooddaa anay koobin magac bixinta la wadaagto maalmo kale oo ay tirsadaan dadku sida Axad oo carabtu tirsato oo erey ahaan la mid ah koobaad
Maalmaha Soomaliga Oo La Barbardhigay Kuwa Carabiga
Sooroga waxaa ay Soomaallidu u taqaannaa maalinta Sabtida
Koobin waxaa ay Soomaallidu u taqaannaa maalinta Axadda
Lamin waxaa ay Soomaallidu u taqaannaa maalinta Isniinta
Lamtuke waxaa ay Soomaallidu u taqaannaa maalinta Salaasada
Koodaar waxaa ay Soomaallidu u taqaannaa maalinta Arbacada
Hakibilaw waxaa ay Soomaallidu u taqaannaa maalinta Khamiista
Hakis waxaa ay Soomaallidu u taqaannaa maalinta Jimcaha
Midabada Af-Ku-Hadalka Soomaaliga
Midabbada af soomaligu yaqanna waa kuwa salka u ah midabada. Midabada wixii baar ah farac af soomaaligu ma wadayaqaanno.Maaxaayeelay ereybixintooda weli lama abuurin.Waxaa jira midabbo baar ah oo uu yaqanno af soomaaligu isagoo ka soodheegtay deegaanka. Sida midabada xidigta, ciraw-caad, xareediga, dambari, madawbacadka, dameeriga, xab-xabiga iyo dahabiga. Waxaa iyana jira midabbo marka loo magac bixinayo laga soo dhahlaaliyo midabada salka ah oo lagu daray suuradinama sifeeye lagu culaysiyay. Sida casaan dhicir ah, ashkir dhiin ah, madaw dugul ah ama madaw xiisan, cagaar ribah iyo caddan dhag ah ama caddaan badhx ah, waxa sidoo kale jira Sureeri diggoon buluug diggoon way jiraan midabbo baadan oo af soomaali loohayo balse qoraagu muuwada helin. Waxaan iyana meesha ka madhnayn midabbo laba magac iyo in ka badan leh.Waxa taa keenay deegaanka iyo duunyada oo af soomaligu ku kala duwanyahay xagga ereybixinta hadday tahay magac iyo haddaytahay erey dhaqmaadkaba. Tusaale waxa inoogu filan midabka caddaan marka uu geela joogo waxa la yidhaahdaa Boos, Xoosh iyo Qori-cad.
Dadkuna mararka qaarkood way la wadaagaan iyadoo lagu naanaysayo. Midabka caddanku markuu joogo fardaha waxa weeye Qaaje ama Qajaawecad. Madawga marka uu geela joogo waxaa loo gu yeedhaa Sugul, marka uu fardaha joogana waxaa la yidhaahdaa Caynab.
Midabada asalka ah ee Af Soomaaligu yaqaanno
Caddaaan midabka caanaha
Ashkir midabka aydinka geela
Casaan midabka dhiigga
Madow midabka Cidaadda ama tukaha
Sureeri midabka cirka
Cagaar midabka doogga
Huruud midabka sagalka
Qalinkii: Xasan Maxamuud “Xasan Burco”